आफ्नो छोरीसमानका १० र ११ वर्षका अवोध बालिकालाई ३६ वर्षिय युवकले रातभर अनैतिक क्रियाकलाप गरे ! यस्तालाई कस्तो कारवाही हुनुपर्ला ? – ईमेची डटकम
आफ्नो छोरीसमानका १० र ११ वर्षका अवोध बालिकालाई ३६ वर्षिय युवकले रातभर अनैतिक क्रियाकलाप गरे ! यस्तालाई कस्तो कारवाही हुनुपर्ला ?
काठमाडौं । केही समयअगाडी राजधानीको एक बसमा एक यात्रुले बसभित्रै हस्त’मै’थुन गरेर अगाडी रहेकी युवतीको कपालमा बि’र्य झारिदिएको घ’टना सेलाउन नपाउँदै अर्को घ’टना घटेको छ ।
अहिलेको घ’टनामा १० र ११ वर्षका बालिकाहरुलाई बसका सहचालकले रातभर अ’नैतिक क्रिया’कलाप गरेका छन् । बाह्रखरी डटकममा प्रकाशित समाचार अनुसार घरबाट निस्किएपछि हराएका यी दुई अवोध बालिकाहरु रात्रि सुत्नको लागि बसमा गएका थिए । बसमै रहेका सहचालकले उनीहरुलाई दुव्य’वहार गरेका हुन् ।
पूरा समाचार तल
काठमाडौंमा बसभित्रै दुई बालिकामाथि यौ’न दुर्व्य’वहार, सहचालक पक्राउ
काठमाडौंमा राति पार्किङ गरेर राखेको बसमा दुई बालिकालाई यौ’न दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बसका सहचालक प’क्राउ परेका छन् । तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित शुभकामना चोकमा ११ वर्षीया र १० वर्षीया बालिकालाई अ’नैतिक क्रि’याक’लाप गरेको आरोपमा बसका सहचालक प’क्राउ परेका हुन् ।
अ’नैति’क क्रियाकलाप गरेको अ’भियो’गमा आज बिहान भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका–३ का बा ४ ख ८२ नम्बरको बसका सहचालक ३६ वर्षीय एल्जित राईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आइतबार साँझ दुई बालिका घरबाट निस्किएका थिए ।
एसएसपी सुवेदीले भने, ‘‘उनीहरु घरबाट निस्किएपछि हराएछन् । राती भएपछि बसका चालकले आफ्नो घरमा लगेर खाना खुवाएको पनि देखिन्छ । खाना खाइसकेपछि उनीहरु बसमा सुत्न गएछन् । बसका सहचालक बसमै रहेछन् । उनीहरु बसमै सुतेपछि राति दु’र्व्यवहार भएछ ।’’ बालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीले राती नै खोजी सुरु गरेको भएपनि बिहानमात्रै उनीहरु भेटिएका हुन् । घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको एसएसपी सुवेदीले बताए ।